Fantaro Rina Randriamasinoro, kandida TIM ho ben’ny tanana Antananarivo-Renivohitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fantaro Rina Randriamasinoro, kandida TIM ho ben’ny tanana Antananarivo-Renivohitra
Nanangona JRR il y a 11 jours
Tsy vahiny eto Antananarivo renivohitra i Rina Randriamasinoro, kandidà ho ben’ny tanàna TIM. Nandany ny fahazazany teto izy ary mahay sy mahalala tsara ny fiainan’ny mponina amin’ny andavanandro. Mitantara ny làlana nodiaviny izy. Tafa sy dinika hahafantarana an’ity Kandida ity.
Andriamatoa Rina Randriamasinoro, tsara ampatsiahivina ihany ary ampahafantarina ireo izay mbola tsy mahalala, « iza moa ianao ? »
Tahiry Ny Rina Randriamasinoro no anarako, fantatry ny maro amin’ny hoe Rina. Kandida ho ben’ny tanàn’Antananarivo, natolotry ny antoko Tiako I Madagasikara na ny TIM, mitondra ny laharana faha 2. Eto dia isaorako manokana ny filohan’ny antoko, Andriamatoa Marc Ravalomanana, nanome ahy izay fitokisana izay.
36 taona aho. Manambady ary mitaiza zaza efatra. 2 ny zanaka naterako, ary ny 2 kosa zanaky ny zokiko izay efa nodimandry fa hiandraiketako ny fitaizana azy ireo. Raha ny fianarana nolalovana kosa indray dia nandalo EPP sy CEG ary Lycée toy ny ankamaroan’ny zaza Malagasy aho, ary nofaranako teny amin’ny ENAM izany.
Raha ny sehatry ny asa dia ny taona 2006 aho no niara-niasa tamin’ny banky iraisam-pirenena tamin’ny alalan’ireny tetikasa famatsiam-bola ireny. Ny resaka “finance” foana ny andraikitra noraisiko tamin’izany. Ny taona 2016 aho no voaantso hiasa tao amin’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra ary nitana ny andraikitra tale ara-bola na “Directeur financier” hatramin’ny volana Jolay 2019 teo. Taorian’izay no nandraisako ny andraikitra maha Sekretera Jeneraly ahy.
Kristianina aho ary matahotra an’Andriamanitra, saingy tsy manakana ahy hanaja ny finoana hafa izany.
Amin’ny ankapobeny dia tekinisianina no ahafantarana izany Rina Randriamasinoro izany. Azonao lazaina ve ny antony nahatonga anao hilatsa-kofidiana?
Marina fa tekinisianina tokoa aho teo aloha. Ary ny fiasako tao amin’ny kaominina sy ny fahitako ny zavatra nisy tao no niteraka ny fahavononako hiasa ho an’ny vahoakan’Antananarivo ka nahatonga ahy hirotsaka ho isan’ny kandida ben’ny Tanàna ho an’Antananarivo Renivohitra. Tsapako ihany koa fa mila olona tanora mavitrika sy sahy ny firenena, hitondra fampandrosoana ho an’Antananarivo Renivohitra. Tsapako fa vitako izany.
Inona kosa indray no nahatonga anao hisafidy ny antoko Tiako I Madagasikara?
Tsy afenina fa efa nankafy sy tao anatin’ny antoko Tiako I Madagasikara foana ny Ray aman-dreniko hatramin’izay. Ary isan’ny nahasarika ahy hiara-hiasa tamin’ny antoko ny fijoroany amin’ny maha izy azy sy ny fananany lanja ary soatoavina manokana izay mifandraika tsara amin’ny fomba fijeriko sy ny tanjona izay tiako ho tratrarina. Izay no nahatonga ahy hiara-hiasa sy hirotsaka ao anatin’ny antoko Tiako I Madagasikara.
Raha hiresaka manokana anao amin’ny maha Rina Randriamasinoro anao kosa, inona no tena mampiavaka anao sy ny soatoavina iainanao?
Soatoavina manokana nolovaiko ny fankatoavana ny Ray aman-dReny, isan’ny mampiavaka ahy izany. Tiako ihany koa ny manaja ny rafitra rehetra izay apetraka na efa mipetraka. Izaho koa dia isan’ny olona tena tia fihavanana sy fiaraha-monina.
Efa niasa teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ianao tao anatin’ny taona vitsivitsy raha ny voalazanao teo, marobe anefa ireo tsikera re sy hita tamin’ny fitantanana izany kaominina izany. Misy fanazavana azonao entina ve mahakasika izany?
Efa hiarahantsika mahalala fa Ramatoa ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana no nitantana ny kaominin’Antananarivo Renivohitra. Amin’ny maha reny azy dia tsy mba tia sehoseho loatra izy, ary izay no antony hilazan’ny olona fa tsy niasa izy. Izaho kosa anefa tao anatiny tao dia mahita ary mahasahy milaza fa niasa izahay teo anivon’io kaominina io, na nisy famatsiam-bola na tsy nisy.
Olana maro be no novantaninay tao satria na ny karaman’ny mpiasa aza tsy voaloa, tsy nisy ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman’ny mpiasa, marobe ny trosa tsy voaloa, saingy niezaka izahay namaha izany olana rehetra izany. Afaka mirehareha izahay hoe nahavita zavatra tao saingy tsy nisehoseho be tamin’ny haino aman-jery ka mety izay no antony mahatonga ny olona hilaza fa tsy niasa izahay. Be dia be ihany koa ny asa natao teny anivon’ny boriborintany, toy ny fanaovana lalan-kely, ny fampandehanan-draharaha tamin’ny ankapobeny, indrindra moa ny teo amin’ny resaka fanomezana ny mponina ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin’ny andavanandro. Ny sampana mpamonjy voina ihany koa izay sahanin’ny kaominina zato isan-jato ny fampandehanana azy.
Hitantsika ihany koa fa tsy mbola nisy vanim-potoanan’ny krizy ka hoe tsy afaka nanao zavatra ny kaominina fa vita an-tsakany sy an-davany foana izay rehetra tokony natao hatramin’izao.
Inona kosa ny tena hoe mampiavaka an’i Rina, fa izay hoy ianao no fiantso anao, amin’ireo kandida hafa ho ben’ny Tanàna ireo?
Olon’ny vahoaka aho ary niaina akaiky niaraka tamin’ny vahoaka, isan’ny tena mampiavaka ahy amin’ireo kandida hifanandrina amiko izany. Raha tsy hilaza fotsiny aho hoe na ny lalana nodiaviko handeha hianatra aza taloha dia nandalo teny an-tanimbary. Fantatro araka izany ny hetahetan’ny vahoaka izay mitovy amiko, ary fantatro hoe inona no andrasan’ny vahoaka amiko. Eo ihany koa ny ny fananako traikefa raha amin’ny resaka fitantanana, izay isan’ny sehatra nianarako sy nohalaliniko manokana.
Olona efa tia manao “défi” aho teo amin’ny fiainana, ary fantatro fa vitako ny ho ben’ny tanan’Antananarivo.